Fizarana vaovao ho an'ny mpianatra »University of Hodges
Tongasoa eto amin'ny Hodges University!
Hodges University's New Student Orientation (NSO) dia manampy ny Hodges 'Hawks hiomanana amin'ny traikefanao!
Ny bokotra etsy ambany dia hitarika anao amin'ny alàlan'ny fizotrany ary hanome fampahalalana lehibe momba ny Oniversitenay. Manomboha izao ary avereno jerena amin'izay fotoana ilanao fanampiana.
Hafatra avy amin'ny filoha Dr. Meyer
Hodges University - andrim-panjakana tsy miankina tsy miankina - manomana ny mpianatra hitrandraka fianarana ambony amin'ny ezaka manokana, matihanina ary olom-pirenena.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny antony maha oniversite miavaka an'i Southwest Florida ny University Hodges, kitiho Eto.
Mihaona amin'ny filoha
Fantaro ny Campus-nao
Fisoratana anarana amin'ny Internet
Fantaro ny Campus anay
Fort Myers Campus Building U sy H
Fanampiana ara-bola sy kaontin'ny mpianatra
Serivisy ho an'ny mpianatra, mpiraki-draharaha ary fidirana
Tranon'ny siansa momba ny fahasalamana ho an'ny mpianatra - U
Misoratra anarana an-tserasera amin'ny alàlan'ny fanompoana-tena HU!
Ny Self-Service HU dia mamela anao hisoratra anarana na hangataka fisoratana anarana ho an'ny fampianarana rehetra amin'ny session ho avy, 24/7, 100% amin'ny Internet:
Hiditra ao myHUgo
Eo ambanin'ny fizarana HU Self-Service, kitiho ny fisoratana anarana sy ny drafitra momba ny diplaoma
Torolàlana momba ny fisoratana anarana
Mba hanamafisana ny fandaharam-potoanao dia tsindrio ny Plan sy ny fandaharam-potoana
MyHUgo dia vavahadin'ny serivisy ho an'ny mpianatra an-tserasera ao amin'ny Hodges University izay ahafahan'ny mpianatra rehetra miditra haingana amin'ny HU Self-Service. Miaraka amin'ny myHUgo, azonao atao ny miditra amin'ny mombamomba anao sy mitarika ny orinasanao ao amin'ny Oniversite an-tserasera.
Mailaky ny mpianatra
Rehefa miditra amin'ny vavahady MyHUgo ianao dia misy rohy mankany amin'ny mailakao miseho eo amin'ny pejy lehibe. Hodges dia hampiasa ny kaonty mailaky ny mpianatra ho fomba ofisialy hifandraisana aminao.
Midira ao amin'ny MyHugo
Canvas dia rafitra fikirakirana fianarana an-tserasera ao amin'ny Hodges University, izay ahafahan'ny mpampianatra sy ny mpianatra miditra amin'ny fitaovana fampianarana, mandefa andraikitra, mifampiresaka ary miara-miasa amin'ny Internet.
Loharano fanampiny sy fanampiana
Hodges University dia manana ekipa IT natokana hanampiana ireo mpianatra amin'ny karazana teknolojia isan-karazany mety hananan'izy ireo. Ireo mpianatra dia afaka mandefa sy manara-maso ny fangatahana fanampiana ara-teknolojia an-tserasera, ary mikaroka fikaroham-bahaolana momba ny fanampian-tena sy ny fomba fampahalalana momba ny fomba. Hampiasa ny adiresy mailaka sy teny miafina Hodges ny mpianatra raha hiditra.
Fanohanana amin'ny birao fanampiana an'ny IT
Eto ny librarians hanampy anao hifantina sy hitady loharano. Na mila fanampiana amin'ny fikarohana ireo angona fitahirizam-boky ianao na amin'ny fitetezana ny boky torolàlana APA, ny mpiasa ao amin'ny tranomboky dia azo jerena manokana, amin'ny alàlan'ny telefaona na mailaka.
Ny boky torolàlana ho an'ny mpianatra dia ho mpitari-dalana anao rehefa manomboka sy manohy ny asanao fanabeazana miaraka amin'ny Oniversiten'i Hodges ianao.
Ny katalaogin'ny oniversite dia ho torolàlana ho an'ny politikam-pampianarana andrim-panjakana izay miavaka amin'ny programa akademika Hodges University.
Fepetra sy fepetra fisoratana anarana
Ny fepetra sy fepetra fisoratana anarana dia manome ny fifanarahana eo amin'ny mpianatra sy ny Oniversite ho an'ny tanjona rehetra amin'ny fisoratana anarana.
Pejin-tahiry ho an'ny mpianatra
Ny pejin'ny loharanom-pahalalana ho an'ny mpianatra dia misy ho an'ny mpianatra rehetra izay hahitanao syllabi fampianarana, ora fiasan'ny mpampianatra, famoahana ary fampahalalana ho an'ny departemantan'ny oniversite hafa. Afaka miditra amin'ity pejy ity ny mpianatra amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny MyHUgo.
Kitapo fanampiana ara-bola
Ny fonosana fanampiana ara-bola dia mety misy fitambarana vola fanampiana, indram-bola ary / na famatsiam-bola hianarana. Ny fahazoana ireo mari-pankasitrahana ireo dia miankina amin'ny habetsaky ny vola misy sy ny fahazoanao tombana araka ny nofaritan'ny Fampiharana maimaim-poana ny fanampiana ho an'ny mpianatra federaly (FAFSA).
Saram-pianarana sy sarany
Ny ekipan'ny Student Account dia afaka manampy amin'ny faktiora, ny fahatakarana ny saram-pianarana ary ny sarany, ny fametrahana ny drafi-pandoavam-bola, sns.
Ny Hodges University dia manolotra safidy safidy drafitra fandoavam-bola isan-karazany handoavana saram-pianarana sy sarany isam-bolana isam-bolana mandritra ny fotoam-pivoriana. Raha mila fanazavana fanampiny, ny mpianatra dia afaka miditra ao amin'ny MyHUgo ary mankany Fampahalalana momba ny kaontin'ny mpianatra.
Ny University Hodges dia niara-niasa tamin'ny BankMobile mba hanolotra safidy bebe kokoa sy fidirana haingana amin'ny famerenam-bola.
Serivisy miaramila sy miaramila
Ao amin'ny Oniversiten'i Hodges dia ho hitanao fa ny hoe Miaramila Miaramila dia tsy zavatra lazainay fotsiny fa haavon'ny fanohanana izay mihoatra lavitra ny efitrano fianarana.
Torohevitra momba ny akademika
Ny Office of Student Experience dia manana mpanolotsaina mpianatra natokana izay hanampy ny mpianatra hamolavola drafitra akademika maharitra ary hametraka tanjona fohy hanatrarana ireo drafitra ireo.
Antsoy ny fanoloran-kevitra akademika amin'ny 800-466-0019
Adiresy momba ny akademika
Career Services dia loharanom-pahalalana maimaimpoana ho an'ny mpianatra sy ny alimana hianarana bebe kokoa momba ny sehatry ny asa nofidiny sy hampivelatra ny drafitry ny asa.
Ny oniversite Hodges dia manohana mavitrika ny zon'ny mpianatra manana fahasembanana hanana fidirana mitovy amin'ny fanabeazana.
Ny oniversite Hodges dia manolo-tena hamorona sy hitazomana tontolon'ny fianarana izay ahafahan'ny olona rehetra mandray anjara amin'ny hetsika ao amin'ny Oniversite mianatra miaraka amin'ny atmosfera afaka amin'ny karazana fanorisorenana, fanararaotana, fitongilanana, fitsarana an-tendrony na fampitahorana.
Zon'ny fiainana manokana (FERPA)
Eo ambanin'ny torolàlana FERPA, ny mpianatra dia manan-jo (1) hanara-maso sy handinika ny rakitsoratry ny mpianatra, (2) hangataka fanitsiana ny firaketana, (3) hanaiky ny hampahafantatra, ary (4) hametraka fitoriana.
Ny Biraon'ny fiarovana ny oniversite ao Hodges dia mametraka ny laharam-pahamehan'ny fiarovana ny mpianatra mandritra ny fotoana rehetra misokatra ny campus.
Arahabaina, nahavita ny firafitry ny mpianatra vaovao ianao!
Misaotra anao nanokana fotoana hahafantarana ny Oniversite Hodges sy ny sampana fanohanana ny mpianatra azon'ny mpianatra rehetra. Amin'ny maha mpianatra anao dia hanana fidirana amin'ity tranonkala ity ianao mandritra ny asanao ao Hodges. Tsy andrinay ny mahita anao mitsangatsangana amin'ny lampihazo rehefa anjaranao ny mahazo diplaoma!
Hawk ianao izao. Jereo ny ampahany!
Azonao atao ny mampiseho ny avonavon'ny sekolyo amin'ny fiantsenana an-tserasera amin'ny Hawks Store. Hahita entana isan-karazany azonao ampiasaina ianao, manomboka amin'ny kapila USB sy ny totohondry ka hatramin'ny akanjo ary Hodges Hawk! Inona no mampiavaka ny fivarotanay? Ho an'ny fividianana rehetra natao, ny ampahany amin'ny vola azo dia mankany amin'ny Tahirim-bolan'ny Hawks Scholarship.